Samuel Nhoma A Ɛto So Abien 23:1-39
Dawid nsɛm a etwa to (1-7)
Nneɛma a Dawid akatakyi no tumi yɛe (8-39)
23 Eyinom ne Dawid nsɛm a etwa to:+ “Yese ba Dawid+ nsɛm ni;Ɔno ne ɔbarima a wɔmaa no so,+Nea Yakob Nyankopɔn sraa no,+Nea ɔtoo nnwom dɛdɛ+ wɔ Israel no. 2 Yehowa honhom nam me so kasae;+Ná n’asɛm wɔ me tɛkrɛma so.+ 3 Israel Nyankopɔn kasae,Israel Botan no+ ka kyerɛɛ me sɛ: ‘Sɛ nea odi adasamma so no yɛ ɔtreneeni,+Na sɛ odi hene wɔ Onyankopɔn suro mu a,+ 4 Ɛte sɛ anɔpa hann, bere a owia apue,+Anɔpa a omununkum nni hɔ. Ɛte sɛ bere a osu atɔ awie na owia abɔAma sare afifi asaase so.’+ 5 Ɛnyɛ saa na me fi te wɔ Onyankopɔn ani so anaa? Efisɛ ɔne me ayɛ daa apam,+Na watoto ho biribiara ma agyina. Sɛnea me nkwagye ne m’anigye nyinaa gyina so no,Ɛnyɛ ɛno nti na ɔbɛma anyin anaa?+ 6 Ahuhufo nyinaa, wɔbɛtow wɔn agu+ te sɛ nwura;*Obi rentumi mfa ne nsa nsesaw. 7 Sɛ onipa rekɔsesaw a,Gye sɛ ɔde dade ne peaw hyehyɛ ne ho;Ogya na wɔde bɛto mu ahyew no dwerɛbee.” 8 Dawid akatakyi no+ din ni: Takemoni Yoseb-Basebet a ɔyɛ baasa no so panyin.+ Ɔno na ogyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa 800 da koro. 9 Ahohi aseni Dodo+ ba Eleasar+ na odi hɔ. Ɔka akatakyi baasa a na wɔne Dawid nam a wɔkekaa nsɛm de buu Filistifo no animtiaa no ho. Ná wɔaboaboa wɔn ho ano wɔ hɔ sɛ wɔrebedi ako, na bere a Israel mmarima san wɔn akyi no, 10 ɔno na ɔsɔre kunkum Filistifo no, na eduu baabi no, sekan a okura no nti, ne nsa yɛɛ no yaw na egyenee.+ Enti saa da no, Yehowa ma wodii nkonim* kɛse;+ na asraafo no dii n’akyi yiyii wɔn a wakunkum wɔn no ho nneɛma. 11 Hararini Agee ba Samma na odi hɔ. Na Filistifo no boaboaa wɔn ho ano wɔ Lehi; ná asaase bi da hɔ a asedua ayɛ so ma, na Filistifo no nti, na nkurɔfo no aguan afi hɔ. 12 Nanso ɔtew gyinaa asaase no mfinimfini kunkum Filistifo no de bɔɔ asaase no ho ban; Yehowa ma wodii nkonim* kɛse.+ 13 Atitiriw 30 no mu baasa kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Adulam+ ɔbodan no mu twabere, bere a na Filistifo asraafo akɔsoɛ Refaim Bon+ no mu.* 14 Saa bere no, na Dawid wɔ abannennen+ no mu, na na Filistifo awɛmfo dɔm nso wɔ Betlehem. 15 Ɛnna Dawid kae sɛ: “O minya Betlehem kurow pon ano abura mu nsu a, anka mɛnom!” 16 Ɛhɔ ara na akatakyi baasa no de anuɔden bɔ wuraa Filistifo asoɛe no mu, na wɔkɔsaw Betlehem kurow pon ano abura mu nsu, na wɔde brɛɛ Dawid. Nanso wannom, na mmom ohwie guu fam maa Yehowa.+ 17 Na ɔkae sɛ: “O Yehowa, ɛmpare me sɛ mɛyɛ saa! Mmarima a wɔde wɔn nkwa* too wɔn nsam yi mogya na mennom anaa?”+ Enti wannom. Eyi ne nea n’akatakyi baasa no yɛe. 18 Seruia+ ba Yoab nua Abisai+ nso, na ɔyɛ baasa foforo so panyin. Ɔno na ogyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa 300; ná wagye din te sɛ baasa no.+ 19 Mmarima baasa no mu no, ɔno na na wagye din kɛse, na na ɔno ne wɔn so panyin, nanso wanto baasa a wodi kan no. 20 Yehoiada ba Benaia+ yɛ ɔkokodurufo* a ɔyɛɛ nneɛma pii wɔ Kabseel.+ Okum Moabni Ariel mma mmarima baanu no, na da bi a na sukyerɛmma atɔ nso, osian kɔɔ abura mu kokum gyata bi.+ 21 Ɔno ara nso na okokum Egyptni ɔbran bi no. Ná Egyptni no kura peaw, nanso ɔde abaa kɔɔ Egyptni no so kohwim peaw no fii ne nsam, na ɔde peaw no kum no. 22 Saa nneɛma yi na Yehoiada ba Benaia yɛe, na ogyee din te sɛ akatakyi baasa no. 23 Ná wagye din sen aduasa no mpo, nanso wanto baasa a wodi kan no. Ne nyinaa akyi, Dawid de no sii n’awɛmfo so panyin. 24 Ná Yoab nua Asahel+ ka aduasa no ho; wɔn a wɔka ho ne Betlehemni+ Dodo ba Elhanan, 25 Harodni Samma, Harodni Elika, 26 Paltini Heles,+ Tekoani Ikes ba Ira,+ 27 Anatotni+ Abiesar,+ Husani Mebunai, 28 Ahohini Salmon, Netofani Maharai,+ 29 Netofani Baanah ba Heleb, Ribai ba Yitai a ofi Benyaminfo kurow Gibea mu, 30 Piratonni Benaia,+ Hidai a ofi Gaase+ subon no mpɔtam hɔ, 31 Arbatni Abi-Albon, Bahurimni Asmawet, 32 Saalbonni Eliaba, Yasen mma, Yonatan, 33 Hararini Samma, Hararini Sarar ba Ahiam, 34 Maakatni ba Ahasbai ba Elifelet, Giloni Ahitofel+ ba Eliam, 35 Karmelni Hesro, Arabiani Paarai, 36 Natan a ofi Soba ba Yigal, Gadni Bani, 37 Ammonni Selek, Beerotni Naharai a na okura Seruia ba Yoab akode, 38 Yitrini+ Ira, Yitrini Gareb, 39 ne Hitini Uria.+ Wɔn nyinaa si 37.